मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति ४२% मात्र, ठेकेदारले काममा तदारुकता देखाएन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति ४२% मात्र, ठेकेदारले काममा तदारुकता देखाएन
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार १७:३८ प्रदेश ०३, मुख्य खबर, समाचार
वैशाख १०, काठमाडौं । आगामी असारदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ४२ प्रतिशत हुन पुगेको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रवर्द्धक संस्थाको भनाइ छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कूल १०२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही भएको पाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको पाइएको छ । जसका कारण आयोजनाको निर्माण कहिले सकिने हो भन्नेमा अनिश्चित छ । आयोजनानै अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन पहिले आयोजनास्थलको निरीक्षण गरी निर्माण अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि आयोजनास्थल हाल सुनसानजस्तै छ । आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ र विद्युतगृहको काम अलपत्र छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीलाई काममा सुधार गर्न निरन्तर निर्देशन दिँदै आएका छौं, सुरुङ, विद्युतगृह, बाँधलगायतका सबै क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा काम गर्न कुनै समस्या छैन तर ठेकेदार कम्पनीले नगद प्रवाहको समस्या देखाउँदै काम गरिरहेको छैन’, उनले भने । ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार काममा सुधार गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीले काममा तदारुकता देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीको मुख्यालयबाट उच्च तहका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन । आयोजना अन्योलमा फस्दै गएपछि आगामी दिनमा के कसरी निकास खोज्ने भन्नेबारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । चिलिमेको प्रबन्ध–सञ्चालक हुँदा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै आयोजना अगाडि बढाएका थिए । मध्य भोटेकोसीले गत २७ फेब्रुअरीमा ३० दिनको समय दिएर काममा सुधार गर्न पत्र दिएको थियो । त्यस अवधिमा काममा सुधार गर्न कम्पनीले कुनै चासो नदिएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिकुमार काफ्लेले बताए ।
‘चीनबाट ठेकेदार कम्पनीका अधिकार प्राप्त अधिकारी पनि छलफलका लागि आए तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काफ्लेले भने, ‘निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण कसरी ल्याउने, नगद कहाँबाट जुटाउनेलगायतका विषयसहित आयोजना निर्माणको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छौं तर उसले दिन सकिरहेको छैन ।’ आयोजनामा ढिलाइ भइरहे प्रवर्द्धक कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । सोबारेमा छिट्टै निर्णय हुने छ । जुरे पहिरो, भूकम्प तथा त्यसपछिका बाढी, पहिरो, समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो ।
हालसम्म बाँधस्थल खन्ने, मुख्य बाँध निर्माण गर्न नदी फर्काउनेलगायतका काम भएका छन् । कूल ७ हजार १२६ मिटर लामो मुख्य सुरुङमध्ये ४ हजार ६० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ढलान गर्ने काम भइरहेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण सम्झौता हुँदाका बखत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रू. १२ अर्ब २८ करोडे थियो । हाल यस आयोजनाको अद्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रू. १४ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको शुरुको कूल लागतमध्ये ५० प्रतिशत स्वपूँजीबाट र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । कूल ५० प्रतिशत ऋणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता भएको छ ।
कम्पनीको जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत शेयरको स्वामित्व संस्थापक शेयरधनीमा छ । त्यसमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनीको एक प्रतिशत, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावरको समान एक/एक प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
यस्तै ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनी समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको १९ दशमलव ५ प्रतिशत, संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीको ३ दशमलव ५ प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयवासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ५४ करोड २० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः रू.८ पैसा ४० र रू.४ पैसा ८० मा खरिद गर्नेछ । यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक रू. २ अर्ब ९० करोड बराबरको आम्दानी हुनेछ । रासस
३० बैशाख २०७६, सोमबार १७:४४